येशूको बारेमा संसारको पहिलो फिल्म हेर्न | Apg29
यो मात्र पूर्ण बाइबलीय साइटहरु मा रेकर्ड क
क्रूसमा गर्न मोटो देखि, येशूको बारेमा पहिलो फिल्म र एक मात्र पूरै बाइबलीय साइटहरु मा रेकर्ड गरिएको छ।
कहिलेकाहीं तपाईंले YouTube मा वास्तविक सुन खोज पाउन सक्नुहुन्छ। 1912 देखि यो मौन फिलिम येशूको बारेमा पहिलो फिल्म हो! यसलाई "क्रस गर्न Manger देखि" भनिन्छ गर्नुपर्छ ( "को मोटो देखि क्रूसमा गर्न")।
यसलाई 1912 देखि एक अमेरिकी फिलिम छ र मिश्र र समकालीन प्यालेस्टाइनमा स्थानमा खिच्नुभयो थियो।
येशूको बारेमा पहिलो फिल्म
क्रूसमा गर्न मोटो देखि, येशूको बारेमा पहिलो फिल्म र एक मात्र पूरै बाइबलीय साइटहरु मा रेकर्ड गरिएको छ। यो 30 पटक उत्पादन लागत रेकर्ड गर्ने व्यावसायिक सफलता, आफ्नो समय थियो।
फिल्म येशूको जीवनको कथा बताउँछ। निर्देशक Sidney Olcott पनि फिल्म तारा अङ्कित। अभिनेत्री र लेखक जीन Gauntier लिपि लेखे र भर्जिन मरियम चित्रण।
क्रुसको (1912) मा Manger देखि अमेरिकी फिलिम लागि पोस्टर।
केही बाइबलीय घटनाहरू चलचित्र मा disclosed। उदाहरणका लागि, बप्तिस्मा गराउने यूहन्नालाई येशूले मसीहको रूपमा बाहिर इशारा, तर हामी बप्तिस्मा देख्न सक्छ। फिल्म को शीर्षक एकदम शाब्दिक भएकोले यसलाई अन्त गर्न आउँदा। क्रस समावेश, तर त्यहाँ कुनै पुनरुत्थानको छ।
त्यहाँ त त्यहाँ पनि कुनै मुक्ति छ, कुनै पुनरुत्थानको छ किनभने यो पनि खराब छ। तर येशू ख्रीष्ट साँच्चै मरेका र जीवन आज देखि पुगेको छ र उहाँलाई सुरक्षित गरिनेछ पाउँदा।
26 भाषामा अनुवाद भएको थियो
Sidney Olcott साँच्चै फिल्म शक्ति बुझ्न पहिलो थियो र समकालीन प्यालेस्टाइनमा ठाउँमा येशूको जीवनको बारेमा गम्भीर उत्पादन गरे। फिल्म एक भारी सफलता थियो र धेरै राम्रो समीक्षा पाए। यो 26 भाषामा अनुवाद भएको थियो र त्यसपछि सिद्धान्त हटाइएको मा भूल।
को फिलिम अवधिमा चोरी प्रयास को फिल्म चालक सिकार भए। निर्देशक Sidney Olcott 30 पटक उत्पादन लागत थियो जो लाभ, को कुनै भाग थियो।
Vitagraph स्टूडियो Kalem स्टूडियो किनेको पछि त फिल्म पछि थपियो संगीत र वर्णन संग जारी थियो 1919. मा फिलिम पुन जारी भएको थियो।
जहाँ पानी येशूले पैदल डबल जोखिम संग गरिएको थियो दृश्य।
पहिलो आवेग - येशूको बारेमा संसारको पहिलो फिल्म
क्रूसमा गर्न प्रबन्धक बाट
क्रुसको गर्न Manger (1912) एक मौन चलचित्र समीक्षा देखि